ICRC: waqti ayaa jira lagu wajaho abaarta Soomaaliya | Xaqiiqa Times - Online Magazine
Home Wararka ICRC: waqti ayaa jira lagu wajaho abaarta Soomaaliya
ICRC: waqti ayaa jira lagu wajaho abaarta Soomaaliya
Magaaladda Geneva ee xarunta Switzerland war qoraal ah oo ay soo saareen saraakiisha guddigga caalamiga ah ee laanqeyrta cas ee marka macagooda lasoo gaabiyo loo yaqaano (ICRC) ayaa sheegay in weli ay jirto fursad wax looga qabankaro musiibo abaareed oo ku baahda Soomaaliya — hase ahaatee, taasi keliya ay tahay haddii deeqbixiyaashu ay imminka u hawlgellaan gacan ka geysashada jawaabaha cakiran ee gargaarka bani’aadminnimo.
Eric Marclay, oo ah madaxa gargaarka hey’adda ICRC ee bariga Afrika ayaa yiri inkastoo xiildheerayaasha hawlaha samafalka ee ku sugan gudaha dalka aysan weli u muuqan astaamo degdeg ah oo muujinaya sida ay abaartu ugu sii baaheyso Soomaaliya hadana ay ka digayaan in xaaladuhu isbadeli karaan.
“Haddii gargaarka farahabadan ee loo baahanyahay la yareysto ama xaaladu kasii darto, waxaanu arki doonaa dadka oo u dhimmanaya gaajo,” ayuu hadalkiisa sii raaciyay Mr. Eric.
Sida uu qabo Eric Marclay, dagaalladda socda ee u dhaxeeya dawladda iyo Al-Shabaab ayaa ku qasbay kummanaan rayid ah inay ka cararaan guryahoodii, mustaqbalka fogna ay saameys ba’an ku yeelankarto marka ay timaado dhinaca nolol maalmeedka, wax soo saarka beeraha iyo xoolaha.
ICRC ayaa dhawaan raashin u qeybisay in ka badan 80,000 oo barakacayaal iyo dad nugul isugu jiray kuwaasoo ku nool deegaanadda ay colaada iyo amni xumidu ka jirto. Waxayna hey’addu sii labo laabtay daddaalkeeda bani’aadminnimo si loo yareeyo macluusha iyo gaajada ka jirta Soomaaliya.
Goor sii horeysay masuuliyiinta dawladda dhexe ee Soomaaliya ayaa Muqdisho kaga dhawaaqay in abaari ku dhufatay toddobo gobol waxayna kasii digeen suurogelnimada inay dhacdo mid la mid ah tii sannadkii 2011-kii, taasoo galaafatay nolosha 260,000 oo qof oo kala barkood ahaa carruur, haddii aan la qaadin tallaabooyin looga hortagayo abaarta.
Abaartaasi, ayaa sabab looga dhigayaa roob la’aan, fatahaado baab’iyey dalagii beeraha oo horseeday cunno yari baahsan iyo qiimaha raashinka oo kor usii kacay.
Previous articleIgu qiimeeya waxa aan ahay!
Next article65 Ruux oo caanka ah Muqdsiho oo Hub ka dhigis lagu sameynayo